AmaProteas angaphezulu ngo-4-0 kodwa uTharanga usondeze umdlalo esiphethweni
CAPE TOWN, SOUTH AFRICA - FEBRUARY 07: Proteas celebrates during the 4th ODI between South Africa and Sri Lanka at PPC Newlands	on February 07, 2017 in Cape Town, South Africa. (Photo by Carl Fourie/Gallo Images)
UFaf du Plessis udlale i-innings yempilo yakhe bese kwamele abukele ngesikhathi ukapteni obambile, uUpul Tharanga, ecishe wathatha ubukhazima bakhe ngeMomentum ODI emangazayo ePPC Newlands ngoLwesibili.
Ekugcineni amaStandard Bank Proteas anqobe obekubukeka sengathi ukunqoba okulula ngama-runs angu-40 ukuze afinyelele ku-4-0 kwi-series futhi alule ukunqoba ekhaya kwimidlalo engu-13 kodwa bekungenjalo. ISri Lanka ibisemdlalweni kwaze kwaba ukuqala kwe-over yesi-44 ngesikhathi uKagiso Rabada, njengoba ejwayele ukwenza kumsebenzi wakhe omfushane, eqeda i-fifth wicket partnership ehluphile yama-runs angu-79 phakathi kwa-Sandun Weerakkody noAsela Gunaratne, kwaqala ukuwa okumangazayo okubone iSri Lanka ilahlekelwa ama-wickets ayisithupha ngama-runs angu-20 emabholeni angu-27.
Ekuqaleni kosuku uDu Plessis ebehlanganise i-highest score yesibili kumaProteas engu-185 (141 balls, 16 fours and 3 sixes) - uGary Kirsten kuphela osenza kangcono ngo-188 wakhe kudlalwa ne-United Arab Emirates nge-1996 World Cup - ukubekela iSri Lanka umphumela obubukeka unzima ka-368, ubeke engqondweni ukuthi abakaze bahlanganise ngisho ama-runs angu-200 kwimidlalo emithathu edlulile.
UDu Plessis ube iProteas yesishagalolunye ukuhlanganisa ama-runs angu-150 noma okungcono nokho sekube kawu-12 lapho uHashim Amla afinyelela khona kathathu kanti uHerschelle Gibbs kabili. Okumangazayo, ukuthi bonke bobahlanu abashaya phezulu kumaProteas kuleliqembu labangu-XI - uAmla, uQuinton de Kock, uDu Plessis, uAB de Villiers noJP Duminy - bafinyelela lapha.
Umphumela wamaProteas beku omkhulu kunawowonke ePPC Newlands futhi sebehlanganise imiphumela yama-runs angu-300 naphezulu kwimidlalo elandelanayo kulenkundla kule-season. Bahlanganisa u-327/8 bedlala ne-Australia kwi-whitewash encomekayo ngonyaka odlulile.
Uma amaProteas ebezitshele ukuthi asenqobile phakathi komdlalo, uTharanga ebeneminye imicabango. Uhole iqembu edlala noNiroshan Dickwella, ekubekeni ama-runs angu-100 kuma-overs e-power play, no-four abangu-13 kanye no-six abane. Lokhu kuqhathaniswa no-59/1 wamaProteas abawuhlanganisile ngesikhathi eshaya. Uqhubeke wahlanganisa u-119 (90 balls, 11 fours and 7 sixes). Yena noDu Plessis baqede nama-strike rate acishe afane.
Ukujwayele ukudlala kanje uTharanga. Yena nompetha uSanath Jayasuriya bahlanganisa u-286 kuma-overs angu-32 nge-wicket yokuqala bedlala ne-England eHeadingley ngo-2006 bese yena noMahela Jayawardene bahlanganisa ama-runs angu-213 kuma-overs angu-38.4 nge-wicket yokuqala bedlala ne-India ngo-2013. Ngalokhu kwesibili, baphinde bahlanganisa ama-runs angu-133 kuma-overs okuqala angu-10.
AmaSri Lankans ebengaphambili kwe-run rate ebidingeka kwamele uDe Villiers abheke kuWayne Parnell ukuze abatakule. UParnell uhlasele ngama-short balls ukukhipha uNo.3, uKusal Mendis, kanye noTharanga ekuphoseni okuthathu kwi-spell sika-2/8 kuma-overs amathathu futhi wasekelwa uRabada ngo-1/19 kwawakhe amathathu okubalwa khona u-catch owisiwe owenze ama-runs amane.
Besekucaca ukuthi kuzofika ekutheni iliphi iqembu elizobambelela kangcono futhi bekungathi kuzoba iSri Lanka ngesikhathi amaProteas ewisa enye i-catch e-deep ukulondoloza i-fifth wicket partnership.
Kodwa umdlalo uphindele ezandleni zamaProteas ngesikhathi uRabada ehlasela, uImran Tahir wathola ama-wicket amabili kwi-over yakhe yokugcina, uDwaine Pretorius naye wathola eyodwa kwathi uParnell waqeda ngomsila ukuze aqede no-4/58 obekuncomeka kwisimo sobusuku.
Ngezibalo, beku umdlalo omangazayo odlalelwe eNewlands kule-format futhi ukunqoba lapha bekuzobankhulu kwiSri Lanka kunokunqoba iT20 Series. Baphakamisele umdlalo wabo kwelinye izinga lapho bebhekene izinhloso kanye nokuqina kwamaProteas.
UDu Plessis ube iMomentum Man of the Match kodwa beku ubusuku lapho ebingahlukaniswa.
AmaProteas azohlonipha abacisha umlilo kwi-ODI yaseNewlands iCSA ihalalisela amaProteas ngokunqoba i-ODI series AmaProteas aqenqeleza ekunqobeni i-series uDu Plessis, noMiller bahlanganise ukunqoba okucacileyo kwamaProteas AmaProteas abuyele enjabulweni AmaProteas abheke ukwakhela kwi-ODI form uMathews uhlula ukulimala ukunqobisa iSri Lanka